RetroPie: tụgharịa Rasberi Pi gị ka ọ bụrụ igwe eji eme egwuregwu | Akụrụngwa n'efu
RetroPie: gbanwee Rasberi Pi gị ka ọ bụrụ igwe eji egwu egwuregwu
Y’oburu n’inwe obi uto banyere egwuru-egwu vidio, ihe ochie ndi a magburu onwe ha ndi na adighi agha agha, ya bu na igha n’ile anya maka ndi nile emulators na oru ndi n’aputa n’ime Raspberry Pi. Otu n'ime ọrụ ndị ahụ iji nụ ụtọ ịkpụgharị bụ RetroPie, na nke m ga-ekpughe igodo niile.
Eziokwu bụ na enwere mmasị na ụdị ọrụ a, ebe ọ bụ na cobodo nke ndị ọrụ omiiko banyere ndị a videogames site na nyiwe gara aga anaghị akwụsị ito. N'ezie, ọbụna ụfọdụ ndị nrụpụta dịka SEGA ma ọ bụ Atari kpebiri inye ụfọdụ n'ime igwe ha gara aga ohere nke abụọ iji gboo nnukwu mkpa a ...
May nwekwara ike ịmasị ịmara ihe kacha mma emulators maka Utu Pi, yana oru ndi ozo dika RecalBox y Nnenna Onwuka. Nakwa ụfọdụ ngwaọrụ maka ndị njikwa iji mepụta nke gị igwe arcade.
1 Gịnị bụ RetroPie?
1.1 Iulatedomi nyiwe
2 Kedụ ka m ga-esi nweta RetroPie?
2.1 Ọ dịkarịrị mfe (ndị ọrụ novice)
2.2 Chọta ROM
3 Add-ons dị
Gịnị bụ RetroPie?
RetroPie bụ oru ngo nke oghe emeghe nke emeziri iji gbanwee SBC gị ka ọ bụrụ ebe egwuregwu egwuregwu egwuregwu vidiyo, ya bụ, ezigbo egwuregwu egwuregwu. Na mgbakwunye, ọ dakọtara na mbadamba dịka Raspberry Pi na nsụgharị ya dị iche iche, kamakwa ya na ndị ọzọ yiri ya dịka ODroid C1 na C2, na ọbụlagodi PC.
Kemgbe ụdị RetroPie 4.6, nkwado maka Raspberry Pi 4 esonyela
Ihe oru ngo a na ewulite oru ndi ozo amaara nke oma dika Raspbian, EmulationStation, RetroArch, Kodi na ndi ozo ọtụtụ ndị dị. A na-achịkọta ihe a niile n'otu ọrụ izizi iji nye gị usoro ikpo okwu zuru oke ma dịkwa mfe ka ị na-eche naanị maka igwu egwuregwu Arcade kachasị amasị gị.
Mana ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ dị elu, ọ gụnyere nnukwu ọtụtụ nhazi ngwaọrụ otú i nwere ike gbanwee na hazie usoro ihe fọrọ nke nta ka ị chọrọ.
RetroPie nwere ike i emomi ihe karịrị nyiwe egwuregwu vidio iri ise yabụ ị nwere ike iji ROM nke egwuregwu ha mee ka ha dịghachi ndụ taa. Ndị kacha mara amara bụ:
Ọtụtụ ihe ndị ọzọ ...
Kedụ ka m ga-esi nweta RetroPie?
Ị nwere ike budata RetroPie kpamkpam n'efu site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke oru ngo. Mana tupu ibanye n'ime ya, ị kwesịrị iburu n'uche na RetroPie nwere ike ịrụ ọrụ n'ọtụtụ ụzọ:
Wụnye ya na sistemụ arụmọrụ dị, dị ka Raspbian. Ozi ndị ọzọ maka Rasppan y Debian / Ubuntu.
Malite na ihe oyiyi RetroPie site na ncha wee gbakwunye software.
Ewezuga ntụgharị a, usoro iji soro Iji wụnye RetroPie site na ncha na SD bụ ihe ndị a:
Budata onyonyo a de RetroPie kwekọrọ na mbipute nke Pi gị.
Ugbu a, ị ga-ewepu ihe onyonyo abịakọrọ na .gz. Nwere ike ime ya na iwu site na Linux ma ọ bụ site na mmemme dịka 7Zip. Nsonaazụ kwesịrị ịbụ faịlụ .img ndọtị.
Jiri usoro ihe omume ụfọdụ nwee ike Dezie SD ma nyefee ihe oyiyi ahụ nke RetroPie. Nwere ike ime ya Etcher, nke dakọtara na Windows, macOS na Linux. Nke a bụ otu usoro maka niile.
Ugbu a fanye SD kaadị gị Ntu Pi ma bido ya.
Ozugbo ịmalite, gaa na nchịkọta nhọrọ na ngalaba WiFi jikọọ SBC gị na netwọkụ. Hazie ihe nkwụnye ntanetị gị kwekọrọ na ya, ebe ị nwere ike ịnwe nne nne ochie nwere ihe nkwụnye USB, ma ọ bụ ịnwere Pi na eriri WiFi, ma ọ bụ eriri RJ-45 (Ethernet) nwere ike ijikọ gị. Kwesịrị ịhọrọ nhọrọ gị ma jikọọ na netwọkụ gị na mbụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa n'ọtụtụ ọnọdụ, ịnwere ike ịwụnye ngwanrọ ọzọ ma ọ bụ karịa emulators.
Ozugbo enwetara ya, ihe ndị a bụ hazie njikwa gị ma ọ bụ ndị na-achịkwa egwuregwu, ọ bụrụ na ị nwere ha. Iji mee nke a, usoro a bụ:
Jikọọ ndị na-achịkwa USB na i nwere. E nwere ọtụtụ ndị na-achịkwa RetroPie dakọtara na Amazon. Iji maa atụ QUMOX ma ọ bụ N'INEXT.. Nwere ike iji ụfọdụ ndị nchịkwa ọhụụ.
Mgbe plugged na, RetroPie ga-akpaghị aka ẹkedori a interface hazi ha. N'ime ya, ọ ga - ajụ gị maka usoro dị iche iche ị ga - eme na onye inyeaka ị ga - agbaso. Ọ bụrụ na ihie ụzọ echegbula, ịnwere ike ịnweta menu emesia iji gbanwee ntọala site na ịpị Start ma ọ bụ na F4 wee malitegharịa.
Emechaa ihe i nwere ike ime bụ gafere ndị ROM inwe egwuregwu vidiyo kachasị amasị gị iji kwadebe site na utu Pi. Can nwere ike ime ya n'ọtụtụ ụzọ, otu bụ site na SFTP (nke siri ike karịa), site na Samba (ọ na-esikwa ike karịa), nke ọzọ bụ site na USB (ọ dịkarịrị mfe ma kachasị mma). Maka nhọrọ USB:
Jiri pendrive ma ọ bụ USB ebe nchekwa emebere formatted na FAT32 ma ọ bụ NTFS. Ha abụọ na-eje ozi.
N'ime ị ga-emerịrị nchekwa akpọ «retropie» n’etinyeghi akara.
Ugbu a, kwụpụ eriri USB ahụ ma tinye ya n'ime Ọdụ ụgbọ mmiri USB nke Utu Pi. Ahapụ ya ruo mgbe Ikanam akwụsị na-egbu maramara.
Kwụpụ USB na Pi ọzọ ma tinye ya na PC gị gafere ndị ROM n'ime ndekọ retropie / roms. Ọ bụrụ na abịakọrọ ndị ROM, ị ga-achọ iwepụ ha ka ha rụọ ọrụ. I nwekwara ike ịmepụta folda n'ime roms na katalọgụ ROM site na ikpo okwu, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta folda a na-akpọ nes maka egwuregwu Nintendo NES, wdg.
Ikwunye USB azụ gị Pi, chere maka Ikanam ịkwụsị na-egbu maramara.
Ugbu a tuo ume EmotionStation site na ịhọrọ Malitegharịa ekwentị site na isi menu.
Ma ugbu a, enwere naanị bido egwuregwuSite n'ụzọ, ịpụ na egwuregwu ị na-emikpu n'ime ya, ịnwere ike iji bọtịnụ Start na Họrọ pịa n'otu oge na onye njikwa egwuregwu gị ma ọ ga-alaghachi na menu nchịkọta RetroPie…
Ọ dịkarịrị mfe (ndị ọrụ novice)
Si ị chọghị ime ka ndụ gị sie ike karịa na ROM ma ọ bụ na ntinye nke RetroPie, ị kwesịrị ịmara na ha ereworị kaadị SD na sistemu a arụnyere, na mgbakwunye na ọtụtụ puku ROM ndị etinyegoro ...
Dịka ọmụmaatụ, na Amazon ree otu 128GB microSD kaadị ikike nke Samsung ika na nke ahụ agụnyelarị RetroPie, yana ihe karịrị 18000 egwuregwu vidio ROM etinyelarị.
Cheta na e nwere ọtụtụ ibe weebụ na thatntanetị na-enye ohere budata ROM iwu na-akwadoghị, ebe ọ bụ na ha bụ egwuregwu vidiyo. Yabụ, ị ga-emerịrị ya n’onwe gị, mara na ị nwere ike ime mpụ megide ihe ọgụgụ isi.
Ọzọkwa, n'ime Ntanetị Intanet ị nwekwara ike ịhụ ụfọdụ nnọọ ochie video egwuregwu ROMs. O doro anya na ị nwekwara Kpamkpam free ROMs na iwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha, dị ka ndị a MAME.
I kwesiri ima na enwere otutu Mee N'onwe Gị oru ngo ike gị onwe gị dị ọnụ ala ma na obere Obere Arcade igwe na utu Pi, yana mepụta ọtụtụ mgbakọ ndị ọzọ site n'oge gara aga n'ụzọ dị mfe. Maka nke a, RetroPie na-enyekwa gị ụfọdụ akwụkwọ na-atọ ụtọ:
Mee N'onwe Gị maka shei acrylic
Mana nke ahụ abụghị naanị ihe ị nwere n’aka gị, ha dịkwa adị ngwa iwu na-adọrọ mmasị na ị nwere ike ịzụta iji kpokọta gị ochie console na a ụzọ dị mfe:
GeekPi retro console shei nke na-eicsomi SuperCOM
NSPi Ọ bụ ikpe ọzọ na-eitomi akụkọ ifo Nintendo NES
Owootcc ihe egwuregwu GameBoy maka Rasberi Pi Zero
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » RetroPie: gbanwee Rasberi Pi gị ka ọ bụrụ igwe eji egwu egwuregwu
millis (): ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọrụ Arduino
Odroid N2: SBC dị mma nke ọzọ na Pip Pi